Ogaden News Agency (ONA) – Ethiopia oo Dib Oogu Noqotay Qarnigii 17aad (Zemene Masafint-gii) – Xassan Macallin
Ethiopia oo Dib Oogu Noqotay Qarnigii 17aad (Zemene Masafint-gii) – Xassan Macallin
Taariikhda Ethiopia marka dib loo eego horay ooma dhicin in si nabadgalyo ah oo aan dhiig ku daadanin xukun loola kala wareego. Tana maadaama isbadel wayn uusan dhicin oo uu wali sii talinayo xisbigii talada gacanta ku hayay oo ah TPLF lama filayo in eey isbadel siyaasadeed la yimaadan lagamana filayo ineey wax kabadelaan 21 sano nidaamkeey wadanka kusoo xukumayeen oo ah qaybi oo xukun (Divide and Rule) & cadaadis awood sheegasho (oppression). Waxaa aad u adag in ummada cadaadis ( oppression) & aragagixin (terrorize) lagu xukumo iyadoo loo adeegsanayo haya’ado sharcidarro ah (illegitimitet institutions). Haddii dad saas lagu xukumi lahaa waxay u suurto galilahayd Kaligood taliyeyaashii aduunka soomaray oon dhamaanteen wada garanayno ha oogu danbeeyo Xusni Mubaark gii Masar.
Kala qaybsanaantan ururka talada Ethiopia gacanta kuhaya ee EPRDF ayaa meel aad u saraysa gaadhay, tusaale ahaan hadaan usoo qaadano ururka OPDO oo ah ururka Oromada ee katirsan isbahaysiga EPRDF ayaan habayaraatee wax mansib sare ah la siinin markii la magacabayay Ra’iisul Wasaare H.M oo ka tirsan ururka Southern Ethiopian People’s Democratic Movement (SEPDM) & Damake Mokonin Hassan oo ka soo jeeda ururka Axmaarda ee Amhara National Democratic Movement (ANDM), halkaas oo uu Ururka OPDO oo isku tirinayay inuu kasoo jeedo qowmiyada oogu badan qowmiyadaha Ethiopia ay arrintaas aad ooga cadhoodeen ooynan xataa 180 xubnood ooy Baarlamaanka Ethiopia eey ku leeyihiin ayaan in kabadan 50% kasoo qaybgalin xafladii lagu dhaarinayay H.M.
Shuucbta Koonfurta Ethiopia
Waxaa badatay goosashada laga goosanayo dawlada Ethiopia waxaa dhawaan ka goostay madax sare oo ka tirsanaan jirtay ururka TPLF. Waxaa kamid ahaa Atakliti Hagos oo ka tirsanaa madaxda sare ee TPLF oo iska dhiibay wadanka Canada & Getachew Belay oo ahaa ku xigeenka ururka horumarinta gobolka Tigreega ooy madax katahay haweenaydii Meles Zenawi, ururkaas ooy hoos yimaadaan in ka badan 300 oo shirkadood ayaa isna wuxuu magan galiyo siyaasadeed ka dalbaday wadanka Marykanka , intaas waxaa dheer inuu dhawaan iska casilay dhamaan xilakii uu u hayay ururka TPLF Ambassador Tawolde Agaame oo ahaa xubin golaha dhexe ah isla markaana nin aad looga danbeeyo ahaa.
Waxaa kale oo isna goostay gudoomiyhii ururka dhalinyarad ee TPLF. Waxaa kale oo badatahay goosashada askarta Booliska federalka ah iyo ciimadaba militariga.
Muslimiinta Itoobiya oo arrintaas ka dhiidhiyay waxay bilaabeen mudahaaradyo waaweyn oo kadhacay Addis Ababa ooy ku diidanaayeen taliska TPLF. Mudaaharaadyadaas waxay keeneen in shacab badan oo muslimiin ah la laayo kuwo badana loo taxaabo xabsiyada. Waxaa sitoos ah loo weeraray culimadii diinta laga baran jiray iyo maamulladii masaajida oo idil. Walina waxaa sii kordhaya maalinba maalinta ka danbaysa kacdoonta islaamka Ethiopia.
Qaybaha Ciidamada Ethiopia: Ciidamada Ethiopia waxay udhisanyihiin 5 qaybood , qaybta Waqooyi, qaybta Koonfureed, qaybta Bari iyo Galbeedka iyo taliska dhexe oo fadhigiisu yahay magaalo madaxa Ethiopia ee Addiss Ababa. Haddaba taliyaha ciidamada bariga (Ogadeniya) oo magaciisa la yidhaahdo General Abraha (quarter) ayaa ka tirasan raga ciimada oogu awooda badan , oo isagu qaybtiisi xidhay oo ah ninka masuulka ka ah xasuuqa ummada reer Ogadeniya , kaasoo ku taajiray dhiiga ummada Somalida Ogadeniya. Waxaan lawada soconaa ineey dawlada Ethiopia xilkii uu uhayay gumaysiga eey ka qaaday Cabdi iley, sidaas waxaa qoray joornaalka la yidhaahdo The Reporter oo afka dawlada kuhadla, intuusan u dhoofin wadanka Emirate-ka halkaasoo eey rabtay Ethiopia oo aad oogu fadeexadowday xasuuqa ka socda Oagdeniya ineey Ina Iley ku qaanbaxdo si eey eeda isaga dusha ooga saaraan.
Guud ahaan bal aan isha kuhayno loolanka siyasadeed ee ka dhex taagan ururka TPLF oo talada wadanka gacanta kuhaya taas oo saamayn wayn ku yeelan karta guud ahaan in isbadel wayn oo lataaban karo uu dhaco wadanka Ethiopia oo qarka usaaran inuu kala bur buro dagaal sokeeyana uu ka qarxo sidii Soomaaliya oo kale.
Mudane Xassan Macallin
Madaxa Waaxda Xidhiidhka Shucuubta Itobiya HAD